‘कृ’मा अनमोलकी हिरोइन बन्नेछिन् अदिती, जान्नुहोस् को हुन् उनी ? | www.aagopani.com Halloween Costume ideas 2015
‘कृ’मा अनमोलकी हिरोइन बन्नेछिन् अदिती, जान्नुहोस् को हुन् उनी ?
अन्तत, नायक अनमोल केसीले आफ्नो पाचौ प्रोजेक्टमा पनि नयाँ नायिकासँग नै रोमान्स गर्ने भएका छन् । उनले काम गर्न लागेको नयाँ चलचित्र ‘कृ’का लागि नायिका फाइनल गरिएको छ । अघिल्ला ४ चलचित्रमा पनि उनले नयाँ नायिकासँग नै काम गरेका थिए ।
अनमोलले यो चलचित्रमा काम गरेवापत्त २० लाख पारिश्रमिक लिएका थिए । अनमोलले काम गर्ने संझौता भएकै दिनबाट यसको निर्माणपक्षले नायिकाको खोजी गरेको थियो । नायिकाका लागि ३० जनाले निवेदन दिएका थिए ।
चलचित्रमा सुवास गिरी र भूवन केसी निर्माता रहेका छन् । कमल गिरी कार्यकारी निर्माता रहेको चलचित्रमा श्री पराजुली सह-निर्माता हुन् । चलचित्रको छायांकन माघबाट सुरु हुने निर्माता सुवास गिरीले जानकारी दिएका छन् । यो चलचित्रका लागि अहिले नायक अनमोल केसी विभिन्न तालिम लिइरहेका छन् । चलचित्रलाई चर्चित सम्पादक तथा चलचित्र ‘आभाष’ निर्देशन गरेका निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले निर्देशन गर्नेछन् ।
चर्चित ब्यानरका साथमा अहिलेका सुपरस्टार नायक अनमोल केसीसँग काम गर्न लागेकी अदिती बुढाथोकी चर्चित मोडल हुन् । उनको सामाजिक संजाल इन्स्ट्राग्राममा १ लाख भन्दा बढी फलोअर्स छन् । अदितीले हालै मात्र भारतको चर्चित म्यूजिक कम्पनी सोनी म्यूजिकबाट बन्न लागेका ३ वटा म्यूजिक भिडियोमा काम गर्नका लागि संझौता गरिसकेकी छिन् ।
अदितीलाई ज्वेलरीको विज्ञापनमा धेरै देख्न सकिन्छ । चर्चित ब्यानरका साथमा नायक अनमोल केसीसँग काम गर्न पाएकोमा उनले खुशी व्यक्त गरिन् । यसको निर्माणपक्षले नायक-नायिक फाइनल भएसँगै अन्य कामलाई धमाधम अगाडि बढाइने बताएको छ । ‘मेकिङमा कुनै संझौता नगरि काम गर्ने र एक उत्कृष्ट चलचित्र दिने प्रयासमा हामी छौ’, निर्माता सुवास गिरीले भने ।